တရားမဝင်ပေမယ့် ဖမ်းလို့မရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူတို့ရဲ့ Con Café လုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ ? - JAPO Japanese News
ကြာ 16 Jan 2020, 11:58 မနက်
အသက်၁၈နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့မကြာခဏသတင်းထွက်‌နေတဲ့ JK လုပ်ငန်း။ အသက်၁၈မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ အထက်တန်းကျောင်းသူအရွယ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရမကိုက်ညီပါဘူး။
JKလုပ်ငန်းလို့ပြောနေပေမယ့် တကယ့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအကြီးကြီးလိုမျိုးပုံမှန်လုပ်ကိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ပဲ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ကဖေးဆိုင်တွေရဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် တားမြစ်လို့လည်းမရပြန်ပါဘူး။ အချိန်ပိုင်းလုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်း ကျောင်းစရိတ်ရဖို့အတွက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
အဲထဲမှာမှ အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့မအရာတစ်ခုကတော့ Con Café လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု။
ကြောင်ကဖေး (Cat Café)၊အစေခံကဖေး(Maid Café) စတဲ့ ကဖေးတွေနဲ့ အမြင်၊အယူအဆတူလို့ Concept Café ကို (Con Café) ဆိုပြီးအတိုကောက်ယူသုံးထားတာပါ။ အတွင်းကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်အကြောင်းအရာတွေကမတူဘူးနော်။
အစေခံကဖေး (Maid Café) တွေနဲ့လည်းမတူပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လို့ရတဲ့ဧည့်သည်က ၂ယောက်၃ယောက်ကလွဲပြီးဝင်လို့မရတဲ့ သေးငယ်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်လို့ပါ။ အဲဒီဆိုင်မှာတော့ အိုင်‌ဒေါတို့ Cosplayerလိုဝတ်စားထားတဲ့ပုံစံမျိူးနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ သူတို့တွေထဲမှာအသက်၁၅နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးမတွေတောင်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကတရားဝင်ပါတယ်။ ၁၈နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ချိန်က ည၁၀နာရီကနေ မနက်၅နာရီအထိဖြစ်လို့ ည၁၀နာရီမတိုင်ခင်အထိအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း Con Café တွေပေါများလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တွေအတွက် အရက်တစ်ခွက်ကို ယန်း၅,၀၀၀ ပေးရပြီး အထက်တန်းကျောင်းသူအရွယ်မိန်ကလေးများကဧည့်ခံကြပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆို ဆိုင်တစ်ခါသွားလိုက်ရင် ပျမ်းမျှ ယန်း၃၀၀,၀၀၀ကျော်လောက်ကျသွားမယ်ထင်တယ်နော်။
Host Club နဲ့ အဆင်မြင့်ဇိမ်ခံကလပ်တွေမှာရှိတဲ့ ရှန်ပိန်တာဝါတို့ဘာတို့ရနိုင်တဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပြီး သောက်တဲ့အခါ ဧည့်သည်တွေပဲသောက်ကြတာများပါတယ်။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကမသောက်ရတဲ့စည်းကမ်းတော့ရှိပါတယ်။
Champagne Tower မှာတော့ ယန်း ၃ သန်းလောက်ပေးရတဲ့ ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။
အတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ငွေနဲ့ယူတာဟာတရားမဝင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယန်း 50,000 တန်ရှန်ပိန်ဝယ်ယူရင်တော့ သူတို့နဲ့တစ်နာရီသာလမ်းလျှာက်ထွက်ဖို့၊ ဒိတ်လုပ်ဖို့အခွင့်အ‌ရေးကိုရနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာကအဲမှာစတာပါ။
ဒိတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ဟိုတယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့သလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုသွားတဲ့မိန်းကလေးပြည့်တန်ဆာတွေများလာတာ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့သလိုဖြစ်လာပါတယ်။
ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနေနဲ့ အသက်မပြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ချိန်က ည၁၀ နာရီမှာပြီးဆုံးပါတဃ်။
အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များများက အိမ်ကနေထွက်ပြေးတာဒါမှမဟုတ် သူတို့မိဘတွေနဲ့သိပ်မရင်းနှီးကြတော့တဲ့သူတွေများပါတယ်။
အသက်မပြည့်ပဲပြည့်တန်ဆာလုပ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတစ်ခုထည်းမဟုတ်ပဲ တခြားကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေမှာပါ မကြာခဏပါဝင်ပတ်သက်လာမိကြပါတယ်။ အဲလိုပတ်သက်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းကာခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတာတွေ၊ ချုပ်လှောင်ခံရတာတွေအထိပါရှိလာပြီး အဆုံးသတ်မှာ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေတွေတောင်ရှိပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်တာကိုဖိအားပေးတာ၊ခြိမ်းခြောက်တာတွေလည်းရှိပြီး အဲကနေတဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသွားစေတာစေတာကလည်း အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
မိဘတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့၊အဆင်မပြေလို့ စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးချင်တာတွေ ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ အဲလိုစိတ်ထွက်ပေါက်ကနေတဆင့် အင်တာနက်တို့အွန်လိုင်းတို့ကမကောင်းတဲ့လူတွေ့နဲ့ချိတ်ဆက်မိကာအခုလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာတာပါ။
အကြီးမားဆုံးပြဿနာကတော့ ဒီကလေးတွေကိုငွေနဲ့ဝယ်ယူနေတဲ့ လူကြီးတွေရှိနေလို့ပဲ။
လူကြီးတွေသာ ဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ရင်၊ငွေပေးမဝယ်ဘူးဆိုရင် အခုလိုမကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာပါ။
ကိုယ့်အတွက်ကောင်းရင်ပြီးရောဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသာလုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်တော့ ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာပြီလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေအတွက် Mens Sexy Show
Corona ကာလမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ ယာကူဇာတို့ရဲ့ပိုက်ဆံရှာနည်း ?
(အိပ်မက်)နဲ့မတူဘဲ၊ “志（こころざし）”(ရည်မှန်းချက်)လို့ခေါ်တဲ့ တွေးခေါ်မှု
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားရဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာဟန်ချက်